बिहिबार २१ पुस / जनवरी ५ को राशिफल सबैको दिन शुभ मंगल रहोस « Pana Khabar
बिहिबार २१ पुस / जनवरी ५ को राशिफल सबैको दिन शुभ मंगल रहोस
प्रकाशित मिति : Jan 4, 2017
आजको राशिफल – वि.सं. २०७३ साल पुस २१ गते। बिहीबार। इश्वी सन् २०१७ जनवरी ५ तारिख। उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल (फलितज्योतिषाचार्य)
व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। लामो यात्रा गर्ने अवसर जुट्नुका साथै वैदेशिक क्षेत्र लाभदायक रहनेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। तर, पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ। तत्काल फाइदा लिँदा भविष्यमा सोचेजति लाभ नहुन सक्छ। खर्च लागे पनि रोकिएका काम बन्नेछन्। चुनौतीका बाबजुद स्वाभिमान रक्षा गर्न सकिनेछ।
ठूलो भागको आशा राख्दा अवसर गुमाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। नयाँ काममा हात हाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला। अवसरवादीहरूले फसाउन सक्छन्। तापनि, मेहनतले उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। काम पूरा नभए पनि आंशिक फाइदा हुनेछ। पछिका लागि गरिएको लगानीले फाइदा दिनेछ। अरूको विश्वासमा पर्दा अन्त्यमा धोका पाइएला।
आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन्। बेसुरमा अरूलाई वचन दिने बानीले आफैंलाई दुःख दिनेछ। केही अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन खिन्न रहनेछ। तापनि समुदायको हक हितको संरक्षण गर्दै धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सकिनेछ। लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ। मिहिनेत गर्दा भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ।
अरूका लागि जुट्नुपरे पनि बिस्तारै फाइदा हुनेछ। समाजमा तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनेछ। मेहनतले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ। रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन्। सानो प्रयत्नले धेरैको भलाइ हुने काम शुभारम्भ गर्न सकिनेछ। तर बाध्यतामा अलमलिनुपर्दा चिताएको काम रोकिएला। मेहनतको केही प्रतिफल अरूको हातमा पुग्न सक्छ, सजग रहनुहोला।
काम बिग्रने भयले सताउनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति रहनेछ। आँटेका काममा बाधा उत्पन्न हुन सक्छ। आजको प्रयत्न निष्फल जस्तै होला। कामका लागि गरिएको भ्रमणमा समय मात्र बित्नेछ। नयाँ काममा हात हाल्न केही समय पर्खंनुहोला। गरी आएको कामलाई भने निरन्तरता दिन सकिनेछ। हुलमुलमा धनमाल जोगाउन सचेत रहनुहोला।
बलजफ्तीले पुरानो सम्झौता भंग हुने सम्भावना छ। धैर्यसाथ बुद्धिको उपयोग गर्दा बिस्तारै काम बन्नेछ। आम्दानी बढ्नेछ भने आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त होला। सुमधुर प्रेम वा दाम्पत्यले प्रफुल्लित भइनेछ। रमाइलो यात्राको अवसर प्राप्त भए पनि सवारी साधन उपयोग गर्दा अलि सावधानी अपनाउनुहोला। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ भने विभिन्न भौतिक साधन प्राप्तिको योग छ।
आलस्य गर्ने बानीले समस्या निम्त्याए पनि परिश्रमीहरूका लागि समय उत्साहजनक रहनेछ। भौतिक साधन जुट्नेछन् र दिगो फाइदा हुने काम सुरु हुन सक्छ। लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। मेहनत गर्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। सूचना बाहिरिने हुँदा आफ्नो मेहनतको फाइदा अरूले उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। आँटेका काममा बाधा पुर्याउनेहरू प्रशस्तै हुनेछन्।
मेहनतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउनेछ। सुखद समाचारले दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्न सक्छ। व्यापारमा धेरै फाइदा नभए पनि कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ। आफ्ना विषयवस्तुमाथि अरूले अधिकार जमाउन सक्छन्। पेटको खराबीले सताउन सक्छ। स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुहोला।
अस्वस्थताले आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। हतारका काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। पढाइलेखाइमा सोचेजस्तो प्रगति गर्न नसकिएला। व्यापार-व्यवसायमा समेत सोचेको फाइदा नउठ्ने देखिन्छ। नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै मेहनत गर्नुपर्ला। निराश नहुनुहोस्, प्रयत्न गर्दा लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ। मेहनतसाथ रचनात्मक कार्यमा जुट्दा फाइदा हुनेछ।
आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि उपलब्धिका लागि समय प्रतीक्षा गर्नुहोला। सहयोगको आशा देखाउनेहरूबाट धोका हुन सक्छ। स्वास्थ्य कमजोर रहनाले काममा जुट्न नसकिएला। तापनि रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुहोला। व्यावसायिक काममा मेहनतको फल प्राप्त हुनेछ। सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ।
बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। चिताएको काम समेत सम्पादन हुनेछ। सम्पादित कामबाट धन लाभ हुनेछ। पहिलेका कमजोरीलाई सुधार्ने मौका छ।
सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनाले काममा आत्मबल बढ्नेछ। रचनात्मक कार्य प्रारम्भ गर्ने समय छ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द पाइएला। विगतको सफलताले थप हौसला मिल्नेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ। मनग्य धन आर्जन होला। विगतका कमीकमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। विछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ।
साभार – नेपालीपात्रो डटकम
नशालु ति नजरैले झापयै डस्यो क्यारुम त नि: राजेश पायल राई (भिडियो)
टाइगर श्राफकी प्रेमिका दिशा पाटनीले गराइन् हट फोटो शूट,तस्वीर भयो भाइरल
४२ बर्षकी अविवाहित सुस्मितालाई बिहे गर्छु भनेर प्रस्ताव गर्ने युवाहरुको घुइँचो